မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ကိုရီးယားခရီးစဉ် Day2Part2/ ကိုရီးယား ရိုးရာ ကျေးရွာသို့ တစ်ခေါက်...
Posted by mabaydar at 9:18 AM
ဗဟုသုတလည်း ရတယ်။ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ် မ..
အသေအချာကြည့်ပြီး ပြောတာနော်..းP
“နေ့လည်စာ စားအပြီးမှာ ကျမတို့အဖွဲဟာ ကိုးရီးယားရိုးရာ ကျေးရွာ တစ်ခုကို သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်” ဆိုတာ ဂွတ်တယ်.. အဆင်ပြေတယ်..
“ထို” တွေ “ဤကဲ့သို့” တွေ “၏” တွေနဲ့ ပင်ရင်း စာဆန်ဆန် ပြောတာထက် ခေတ်သစ် သတင်းကြေညာပုံ (စကားပြောဟန်အတိုင်း) အတိုင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြောရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်မိတယ်..
တောရွာ တီးလုံးက လိုက်ဖက်ပါတယ်.. ဒီဂျေလေးနဲ့ဆိုတော့ ပိုဂွတ်တာပေါ့.. မြူးတယ်.. ပျော်လာတယ်..
Mission Impossible တီးလုံးကတော့ သမ္မတ ရုပ်ရှင်ရုံထဲ ရောက်သွားသလိုပါပဲးP
ဝက်ကို အောအော့တွေ ကျွေးတာ ဒို့ပြည်ကြီးက နယ်ရွာတွေမှာ ရှိပါတယ်.. ပန်းမုံလာလို့ခေါ်တဲ့ မုန်လာပန်းကို အောအော့တွေ ရေဖျော်ပြီး လောင်းတာမျိုးတောင် တွေ့ဘူးသေးတယ်.. Natural Fertilizer ဆိုတာ တကယ်အဟုတ်..
“ဒီလိုကျေးလက်ရိုးရာနဲ့ ကျေးလက်အိမ်မှာနေပြီး ရိုးရာထိမ်းသိမ်းရုံဖြင့် ကိုရီးယားအစိုးရက သူတို့ကို လခပေးထောက်ပံ့ထားပါတယ်...” တဲ့ ဒို့ပြည်ကြီးမှာတော့!!!!!!းPးP
ရေနွေးကြမ်း အမြည်း မျှော်နေတာက တကယ့်ကို သနားစရာ မျက်နှာပေး.. (သရုပ်ဆောင် ဝါသနာပါပုံရတယ်..)
ပထမပိုင်းက “အခုစားနေတာ ဘူဖေး” ဆိုတာကို ဆူပုပ်ပုပ် မျက်နှာနဲ့ ပြောသွားတာ မှတ်မိနေတယ် (ကော်မန့်ပေးဘူးတယ်)
ဒီမှာလည်း “သောက်တော့ သောက်လို့ ကောင်းတယ် ချဉ်ချဉ်ချိုချိုလေး” ဆိုတာကို မှတ်ထားလိုက်ပြန်ပြီးP
နောက်တစ်ပိုင်းမှာ ဘာလာမလဲ စိတ်ဝင်စားမိတယ်..
သေချာတာကတော့ မဗေဒါက အနုပညာဓါတ်ခံတွေ အပြည့်အဝ ရှိနေတဲ့ ဘလော့ဂါ စစ်စစ် တစ်ယောက်ပါပဲ.. ဆန်းသစ်မှုတွေကို ကြိုဆိုပါတယ်..
(ကော်မန့်ဖတ်ပြီး ပြုံးများနေမလားးP)
12/04/2009 11:32 PM
ကိုရီးယားခရီးစဉ် ကိုလာကြည့်သွားပါတယ်။ အားရပါးရလည်းရယ်သွားပါတယ်။ ကျမတော့ ဒီ Travel Documentary လေးကိုကြိုက်တယ်။
12/04/2009 11:39 PM
I saw about Jeju toilet thing in 'Tamra' drama..i thought they use like that only in ancient time..
12/05/2009 2:14 AM
Anonymous ရေ... အရင်တစ်ခေါက်က ကွန်မန့်လဲတွေ့ပါတယ်... ခုလို အကြံပေး အသေးစိတ်ဝေဖန်အားပေးတဲ့အတွက်လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... စကားပြောရာမှာ တခြားနိုင်ငံကလူတွေလို casually စကားပြောဟန်အတိုင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပြောချင်ပါတယ်... ဒါပေမဲ့ မြန်မာစကားကိုက Monotone ပါ... ပြီးတော့ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းကလဲ ပုံမှန်ပြောလိုက်ရင် တချို့ကရိုင်းတယ်တို့ ဘာတို့ ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ... အတတ်နိုင်ဆုံး စဉ်းစားပြီး နောက်ခရီးတွေကျရင် ကြိုးစားကြည့်ပ့ါမယ်... ဒီကိုရီးယားခရီးစဉ်ကတော့ သွားပြီသားဆိုတော့ ပြင်လို့ရတော့ဘူး... အကြံပြုချက်အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်... နောက်လဲ အားပေးပါ...
မြစ်ချေသူ ရေ ... သူများကို စိတ်ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒီ Travel Documentary လုပ်ရတာ အကျိုးရှိသွားပြီပေါ့.. ကျေးဇူးပါ
Tommygirl ... I am not sure.. but it still stink. that means they are still doing like that.
12/05/2009 11:11 PM
အင်း အသံသွင်းထားတာ ပုံစံပြောင်းထားတော့ ကြည့်ရတာ ခါတိုင်းနဲ့မတူ တမူထူးပြီး တမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်။ မိုက်တယ်....
နင့်အသံကလဲ လူကြီးလေး ကျနေတာပဲ.. .
ဒီလိုလဲ ဖြစ်တာပဲလား..... :D
မနက်ကတည်းက comment ပေးတာ မရလို့ အခုမှပဲ ရေးရတော့တယ်ဟာ....
ဗေဒါမရေ... နင်ငါ့အမေကိုတော့ အပြတ်မုန့်ကျွေးသင့်နေပြီ။ ဒီ video ကို ငါ့အမေကြည့်ပြီးတော့ နင့်ကို ရေရေလည်လည် ချီးကျွေး... အဲ.... :D ချီးကျူးနေလို့ ..ဟီးးး တော်လို့တဲ့... ဟီးးးး ဟီးးးး နောက်ပြီး နင့်ကို လှတယ်တဲ့... :p
ဟာ.. ကိုဟတ်ကြီး အမေကို အပြတ်ကို မုန့်ကျွေးချင်တာ... တကယ်.... အစ်ကိုတို့ဆီ အလည်ခေါ်လေ... အစ်ကို့ကိုပါ မုန်းကျွေးပါ့မယ်... ဟဲ.. ဟဲ... အလည်ခေါ်ဖို့ စောင့်နေမယ်... ဟိဟိ
1/07/2010 2:56 PM
ဂျဲဂျုသွားဖို့ တော့အခြေအနေမပေးလို့ သွားဖြစ်မယ်မထင်ဘူး
အမတို့ က ခဏရောက်လို့ မသိသာပေမယ့်
ဒီကအဘွားကြီးတွေလဲ ပန်းသီးဘွားဘွားတို့ နဲ့ တူတူပါပဲလေ
နောက်တလအတွင်း ဆိုးလ်ကိုရောက်ဦးမယ်ဆို ပြောပေါ့
လျှောက်လည်ဖို့ လိုက်ပို့ မယ်လေ
စိတ်ကသာ ရှိသော်လည်း ခုမှသာ မှတ်ချက်ကို လာရောက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကို လာကြည့်ဖို့ပြောတုန်းက ချက်ချင်းသွားကြည့်ဖြစ်ပါတယ်(အစပိုင်းလေးကို)
စစချင်းကြည့်နေရင်းကို မျက်နှာမှာ အပြုံးတွေ တက်လာပါတယ်။
မိုက်လှချေလား ဆိုပြီးတော့ ဂုဏ်ယူမိတာရယ်
မဗေဒါတို့ အရမ်းကို တိုးတက်နေပြီဆိုပြီး ပိတိဖြစ်မိတာရယ်တွေကြောင့်ပါ။
ခု ဒီနေ့ (အစ အဆုံး) ထပ်ခါပြန်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်တာတွေနဲ့ အိုင်ဒီယာကို တော်တော်ကြီးကို သဘောကျမိပါတယ်။ (အရင့်ဟာတွေထက် အများကြီး ကောင်းတယ်ဗျ့)
(ကျွန်တော့် ကိုယ်ပိုင်အမြင်အနေနဲ့ သိပ်ပြီးအားမရတာလေးတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်)
ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ ကင်မရာမန်းနေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ရိုက်ရမယ့် အခြေအနေကို နားလည်ပါတယ်။ Proလည်းမဟုတ်သေး၊ အချိန်လည်း မရှိဘူးဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် အမြင်ကိုပဲ ပြောပြတာပါ။
မဗေဒါရဲ့ ဝတ်စားဆင်ရင်မှုပါ။ ဒီထက်ပိုပြီး အစပ်အဟပ်တဲ့တာ ဝတ်ရင်ပိုပြီးလိုက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အားလုံးခြုံပြီးပြောရရင်တော့ (လက်ရှိထဲမှာတော့ ဒီတစ်ခုက အကြိုက်ဆုံးပေါ့ဗျာ)
2/20/2010 8:19 PM
ခုလို သေချာလာပြီး ကြည့်ရှု အားပေးသွားတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... စေတနာအပြည့်နဲ့ ဝေဖန်ပေးသွားတာကိုလဲ အလေးထားပါတယ်...
ဆင်ခြေပေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူး... ဒါပေမဲ့ အကျီင်္နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ မဗေဒါရဲ့ အခက်အခဲနဲ့ ယုံကြည်မှုကိုတော့ ပြောပြချင်ပါတယ်...
မဗေဒါတို့သွားတာ သိတဲ့ အတိုင်း tour package နဲ့ ဆိုတော့ မနက် ထွက်တာနဲ့ ဟိုတယ်ကို ပြန်မ၀င်ဖြစ်တော့ပါဘူး... စာရွက်ထဲမှာ ဘယ်တွေသွားမယ်ဆိုတာ ရေးထားပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေ ဂိုက်က အဆင်ပြေတဲ့နေရာကို အရင်ပို့တတ်ပါတယ်... အကျီင်္လဲချိန်မရှိသလို... တစ်ဆက်တည်းသွားရတဲ့ အတွက် အကျီင်္ပြန်လဲစရာ အခွင့်လဲ မရှိပါဘူး... ကိုရီးယား ခရီးစဉ် Day2 Part 1 မှာလဲ ဒီအကျီင်္ပဲ ၀တ်ထားတာပါ.. ခုဗွီဒီယိုက အဲဒိနေ့ကနဲ့ တစ်ရက်ထည်း ရိုက်ထားတာပါ.. ဒါက နေ့လည်စာစားအပြိး သွားခဲ့တဲ့နေရာပါ... မနက်တည်းက ၀တ်ထားတဲ့ အကျီင်္ပါ...
ပြီးတော့ မသင့်တော်ဘူး သင့်တော်တယ်ဆိုတာလဲ ဒီလိုမျိုး ခရီးသွား ဗွီဒီယိုမှာ မဗေဒါကတော့ သိပ်ပြောလို့မရဘူးထင်တာပါပဲ.. မဗေဒါက အဲဒိကျေးရွာသူအဖြစ် သရုပ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး... အဲဒိ ကျေးရွာကို လာလည်တဲ့သူပါ... ခရီးလာလည်တာပါ... အဲဒိအတွက်အကြောင့် မဗေဒါက တောရွာနဲ့ လိုက်ဖတ်တဲ့ အ၀တ်အစားမျိုး မ၀တ်ရင်လဲ ဘာမှ မဖြစ်လောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်...
ဒါပေမဲ့ အကြံပေးချက်ကိုတော့ စိတ်ထဲမှာ မှတ်သားထားပါ့မယ်...
မဗေဒါရဲ့ ဗွီဒီယိုတွေကို ခုလို အမြဲ သေသေချာချာကြည့်ပြီး ကွန်မန့်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်မိပါတယ်...
2/21/2010 3:14 AM